Ogaden News Agency (ONA) – Shirwaynahii Haweenka Somalida Ogadenya oo Fooda Inugu soo Haya
Shirwaynahii Haweenka Somalida Ogadenya oo Fooda Inugu soo Haya
Waxaa dhaaman gabdha Somalida Ogaadeenya lagu wargalinayaa inuu soo dhawaaday waqtigii loo balansanaa kasoo qaybgalka shirweynaha Haweenka Somalida Ogaadeenya oo lagu qaban doono haduu Eebuhu yiraahdo caasimada wadanka Denmark ee Copenhagen dhamaadka sanadka aan kujirro.
Wuxuu Shirwaynaha Haweenka S.Ogadenia bilaabanayaa Maalinta Jimcada ah oo ku aadan 26ka Bisha December (26-12-2014) wuxuuna dhamaanayaa 28ka Bisha oo Axad ah hadii Eebe idmo (28-13-2014). Waxaa laga codsanayaa kasoo qayb galayaasha Shirka inaysan ka dambaynin 25-12-14 oo ku aadan maalinta khamiista ah hadii Eebe idmo.
Waa markii oogu horaysay taariikhda intuu socday Halganka Somalida Ogadenya oo shirweyna noocan oo kale ah ay iskugu yimaadaan Haweenka Somalida Ogadenya ee kunool dunida dacaladeeda.
Waxaa xusid mudan in wadanka Denmark lagu mideeyay sanadkii 2010 shirwaynihii lagu yagleelay ururka Dhalinyarada iyo Ardayda Somalida Ogadenya ee marka lasoo gaabiyo layidhaahdo OYSU.
Hadaba yaan lamooogaanin kaqaybgalka shirwaynahan taariikhiga ah oo lagu falanqayn doono Haduu Eebe Idmo arima badan oo muhiim ah oo quseeya halganka Shacabka Somaliyeed ee Ogadenya iyo doorka ay Haweenka S.Ogadenya ka qaataan halgankii soo taxnaa.